Inona no lanjany lehibe amin'ny backlinks amin'ny SEO?
Nahoana no zava-dehibe tokoa ny manana lamin'arivony amin'ny SEO? Raha te-hijanona amin'ny tranonkalan'ny orinasa ianao raha miala amin'ny fifaninanana, ny fomba tsara indrindra dia ny manandrana manangana rindran-damina tsara amin'ny SEO izay ahitana ny famoronana votoaty, meta fanatsarana, ary ny fikarohana teny fototra. Noho izany, inona no mahatonga ny fivoarana avo lenta ho an'ny fampiroboroboana ambony indrindra amin'ny aterineto? Andeha hojerentsika hoe inona no mahatonga ny fichier tsara, ary amin'ny fomba ahoana no tokony hitondranao tetik'ady fanorenana rohy mba hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra.
What Makes Backlinks Quality With SEO?
Voalohany sy amin'ny ankapobeny, amin'ny alàlan'ny famaritana, ny backlink-kalitao tsara dia maneho ny rohy mampiseho ny pejin'ny tranonkalanao avy amin'ny tranonkalan'ny olon-kafa hafa miaraka amin'ny pejy avo lenta kokoa noho ny amin'izao fotoana izao. Raha ny marina, Google dia manao ny tsara indrindra mba hampisehoana ireo mpikaroka mavitrika fa ny vokatra mety sy mifanentana indrindra amin'ny fangatahany ny teny fanalahidy manan-danja. Amin'izany, ny goavam-pikarohana dia hanome loka ambony kokoa amin'ireo tranonkala manana fahefana matanjaka, ary noho izany dia mety ho sarobidy sy mahasoa ho an'ny olona maro. Izany no mahatonga ny fanatsarana ny fahitana ny tranonkalanao amin'ny aterineto dia mila manana andian-backlinks kalitao miaraka amin'ny SEO.
Inona no mahatonga ny tetikady fanorenana tsara?
Misy toro-hevitra maro samihafa hanatsarana ny paikady fananganana rohy. Fa manoro hevitra anao aho mba hanandrana ireto fomba manaraka ireto mba hahatonga ny fifandraisana tsara indrindra sy hahomby amin'ny fiakarana an-tampon'ny SERPs:
Mametraka fifandraisana mahasalama miaraka amin'ireo tranonkala PR manam-pahefana mba hiasa amin'ny gazety tsy tapaka. Amin'izany fomba izany, ny fanitsiana ny votoatinao (na maimaim-poana na amin'ny antony ara-drariny) dia hanome fahafahana tsara ho an'ny fanabeazana an-tserasera.
Ampidiro any amin'ny toerana samihafa eo an-toerana, manerana ny firenena sy ny fampahalalam-baovao maneran-tany, izay tena manan-danja amin'ny tsenan'ny orinasa na orinasa orinasa. Raha manao izany ianao, dia afaka mampiroborobo sy mamoaka ny famoaham-peo ataonao amin'ny gazety, ary mahazo fitarihana bebe kokoa, famandrihana, rakitra ary fivoaran-tranonkala mitombo tsikelikely.
Aza sakanana ny fotoanao sy ny ezaka amin'ny fanoratana lahatsoratra bilaogy - izay mety handoa, azoko antoka. Misy sehatra midadasika eto mba hahazoan-drakitra bebe kokoa fanampiny amin'ny fampivoarana SEO avy amin'ny bilaogy vahiny. Tadidio fa mikatsaka hatrany ny votoaty vaovao tena ilaina ny fikambanan'ny mpitoraka bilaogy ankehitriny. Noho izany, afaka ho lasa mpitoraka bilaogy vahiny ianao mizara ny fahefana matanjaka sy ny fahaizanao matihanina mba hahazoana bakalorea ho setrin'izany.
Fantaro bebe kokoa sy ny fomba azo atao amin'ny fampivoarana amin'ny alalan'ny fitaovan'ny aterineto samihafa ho an'ny fananganana rohy sy ny fikarohana fikarohana. Maro ireo fitaovana an-tserasera maro azo alaina amin'ny fidirana mivantana mba hanampy anao hanao izany. Raha ny amiko, vao haingana aho no nanandrana ny Open Site Explorer avy amin'ny Moz, Semalt Analyzer, ary ny mikiakiaka Frog SEO Spider - ary nahitako tombony be dia be omena ho an'ny backlinks miaraka amin'ny SEO izay tsy mbola fantatra hatrizay.
Noho izany, tadidio fa ny fanaovana fanaraha-maso tsara amin'ny tranokala miaraka amin'ny fitaovana mety dia afaka manampy anao hahazo ny sarin'ny fampisehoana ankapobeny ao amin'ny tranonkala. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka ny hanara-maso hatrany ny lafiny rehetra izay mila manitsy sy mahomby haingana amin'ny fotoana. Raha manao izany ianao dia afaka mahazo antoka fa ny tranokalanao dia manana ny zava-drehetra ao amin'ny toerana mety Source .